Zithini iiVithamini zeWebhu eziPhambili zeGoogle kunye namava ePhepha lamava?
NgoLwesine, Septemba 9, 2021 NgoLwesine, Septemba 9, 2021 Douglas Karr
UGoogle wabhengeza ukuba iiVitals zeWebhu eziPhambili ziya kuba yinto esezingeni ngoJuni 2021 kwaye ukukhutshwa kulungiselelwe ukugqitywa ngo-Agasti. Abantu kwiWebhusayithiBuilderExpert badibanise le infographic ebanzi ethetha kwiGoogle's Core Web Vitals (CWV) kunye neePage Experience Factors, indlela yokulinganisa, kunye nendlela yokwenza olu hlaziyo. Zithini iiVithamini zewebhu eziPhambili zikaGoogle? Iindwendwe zendawo yakho zikhetha iisayithi ezinamava amakhulu ephepha. Kwi
Iindlela zokuThengisa ngeDijithali kunye noQikelelo
Amanyathelo okhuseleko olwenziwe ziinkampani ngexesha lobhubhane aphazamise kakhulu ukuhanjiswa kwempahla, indlela yokuziphatha yokuthenga kwabathengi, kunye neenzame zethu zokuthengisa ezinxulumene noko kule minyaka imbalwa idlulileyo. Ngokoluvo lwam, owona mthengi mkhulu kunye notshintsho lweshishini lwenzekile ngokuthenga kwi-Intanethi, ukuhanjiswa kwekhaya, kunye neentlawulo ezihambayo. Kubathengisi, sabona utshintsho olukhulu kwimbuyekezo kutyalo-mali kubuchwephesha bokuthengisa ngedijithali. Siyaqhubeka nokwenza okungaphezulu, ngaphezulu kwamajelo kunye namajelo, sinabasebenzi abambalwa-abasifunayo
Ungalonyusa njani ixesha lokuzibandakanya kunye neNtengiso ngezahlulo zoluhlu lwe-imeyile
NgoLwesibini, Agasti 17, 2021 NgoLwesibini, Agasti 17, 2021 Douglas Karr
Uluhlu lwakho lwe-imeyile ludlala indima ebalulekileyo kwimpumelelo yalo naliphi na iphulo le-imeyile. Kodwa unokwenza ntoni ukuze lo mbandela ubalulekileyo usebenze endaweni yakho ngexesha leeholide- lelona xesha lixhamlayo lonyaka kwishishini lakho? Isitshixo sokwahlulahlula idatha ... ukuqala ukubamba iinyanga zedatha ngaphambi kwexesha leeholide linyathelo elibalulekileyo eliya kuthi likhokelele kuthethathethwano olukhulu lwe-imeyile kunye nentengiso. Nazi ezinye
Ngaphandle kwamathandabuzo impembelelo yemithombo yeendaba zentlalo njengejelo lokuthengisa inyuka minyaka le. Amanye amaqonga avela, anje ngeTikTok, kwaye amanye ahlala ngokufana ne-Facebook, ekhokelela kutshintsho oluqhubekayo kwindlela yokuziphatha kwabathengi. Nangona kunjalo, ngokuhamba kweminyaka abantu beziqhelanisa neempawu ezithiwe thaca kwimidiya yoluntu, ke abathengisi kufuneka bavelise iindlela ezintsha zokuphumelela kwesi sitishi. Kungenxa yoko le nto ukujonga imeko yakutshanje kubalulekile kuyo nayiphi na intengiso